Soosaarayaasha Samsung - Shiinaha Samsung Factory & Alaab-qeybiyeyaal
iPhone 12 taxane Corning Go ...
Samsung S21 Ultra 3D Hot-noqo ...
Astaanta muraayadda astaanta u ah ...
2.5D Anti Buluug Light
2.5D High Clear Anti-Boorka T ...
Samsung S21 Ultra UV xabagta qaboojiyaha
Moodooyinka ugu caansan ee Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, iyo VIVO dhammaantood way istcimaalaan shaashado qaloocsan oo leh leex weyn. UV xabagta qaboojiyaha muraayadda leh siiyay waxqabadyo wanaagsan iyo ilaalin iyaga ah, oo noqday nooc ka mid ah
muraayadaha qabow ee si weyn ay u aqbaleen macaamiisha
Samsung S21 2.5D Full Cover Dabeecadaha Muraayadda Muraayadda
Muraayadda muraayadda leh ee muraayadda ah ee loo yaqaan 'Samsung S21', daahfurnaan sare iyo naqshad buuxda oo caymis ah, waxay ku siinaysaa gees ilaa gees gees ah taleefankaaga.
Samsung S21 2.5D Glue Muusiga Full ilaaliyaha Muraayada Muraayadda
Muraayadda muraayadda leh ee muraayadda ah ee loo yaqaan 'Samsung S21', daahfurnaan sare iyo naqshad buuxda oo caymis ah, waxay ku siinaysaa gees ilaa gees taleefankaaga. 0.25mm muraayad aad u khafiif ah ayaa xaqiijineysa waxqabadka xasilloonida leh taabashada xasaasiga ah.
Samsung S21Ultra 3D Xabagta Buuxda ee ilaaliyaha Muraayada Muraayadda
Muraayadaha muraayadda leh ee muraayadda leh ee loo yaqaan 'Samsung S21 Ultra', daahfurnaan sare iyo naqshad buuxda oo caymis ah, waxay ku siinaysaa gees illaa gees taleefankaaga. 0.25mm muraayad qafiif ah oo khafiif ah ayaa hubinaysa waxqabadka xasilloonida leh taabashada xasaasiga ah
Samsung S21 Ultra 3D Heat Laabaya Muraayadda Muraayada Muraayadda ah
Muraayadaha muraayadda leh ee muraayadda ah ee loo yaqaan 'Samsung S21 Ultra', 3D nashqadeynta daboolka oo buuxa ayaa ilaalin kara muuqaalka oo dhan. Koollada cirifka sare loo qaaday oo aan sahlaneyn in laga baxo, waxay ka hortagtaa xoqida iyo wasakhda.
Samsung S21 Plus 2.5D Full Cover Dabeecadaha Muraayadda Muraayadda
Muraayadda muraayadda leh ee muraayadda ah ee loo yaqaan 'Samsung S21 Plus', daahfurnaan sare iyo naqshad buuxda oo caymis ah, waxay ku siinaysaa gees ilaa gees gees ah taleefankaaga. Koollada kor loo qaaday oo kor loo qaaday, ma fududa in la iska tuuro. .
Samsung S21 Plus 2.5D Glue Muusiga Full ilaaliyaha Muraayada Muraayadda
Muraayadaha muraayadda leh ee muraayadda ah ee loo yaqaan 'Samsung S21 Plus', daahfurnaan sare iyo naqshad buuxda oo caymis ah, waxay ku siinaysaa gees ilaa gees gees ah taleefankaaga. 0.25mm muraayad aad u khafiif ah ayaa xaqiijineysa waxqabadka xasilloonida leh taabashada xasaasiga ah.
Samsung S21 Ultra 3D Hot-qalooca TPU Screen Protector
OTAO's 3D filimka kulul ee foorarsiga ah ee TPU waxaa badanaa loogu talagalay taleefannada gacanta ee qalooca suuqa. Calaamadaha la taageeray waxaa ka mid ah Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Sony iyo wixii la mid ah. Waxaan u adeegsanaa alaabada ceyriinka ah ee laga keeno Koonfurta Kuuriya si aan u hubino in dusha sare uu yahay mid xoqida u adkaysta, siman, iyo gudbinta iftiinka sare. Si wada jir ah ula xirirkeena, rakibida ayaa noqota mid aad u fudud.